Al-Shabaab oo gaadiid ku gubay Shabeelaha Hoose – news
Al-Shabaab oo gaadiid ku gubay Shabeelaha Hoose
Ilaa iyo hadda maamulka Shabeelaha Hoose war kama soo saarin dhacdadaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wararka laga helayo deegaanka Buulalow oo qiyaastii 3KM u jira degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in halkaas lagu gubay gaadiid dhuxul siday oo magaalada Muqdisho ku wajahnaa.
Gaadiidka oo nooca isjiidka Xamuulka ah ayaa waxaa ku rarnaa dhuxul laga keenay gobolka Shabeelaha Hoose, taasoo uraneed ganacsato reer Muqdisho ah.
Wararka ayaa intaa ku daraya in gaariga ay dab qabad siiyeen Ururka Al-Shabaab oo dhabbaha u galay, balse waxaan la ogeyn halka ay la adeen wadayaashii gaadiidka oo la sheegay in gaadiidka lagala degay.
Ilaa iyo hadda maamulka gobolka Shabeelaha kama hadlin dhacdadaan.